Ikotishi elisanda kulungiswa eline-sauna nobhavu oshisayo. - I-Airbnb
Ikotishi elisanda kulungiswa eline-sauna nobhavu oshisayo.
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Thomas
Ikotishi elisanda kulungiswa eliphakathi kweHals neHou. 1 km ukuya olwandle, 800m ukuya epaki lamanzi langaphandle kanye negalofu elincane, kanye no-2 km ukuya emathubeni okuthenga nezindawo zokudlela.
Indlu inamakamelo okulala ama-3, ama-2 anemibhede ephindwe kabili, elilodwa linombhede ozidonsayo wabantu abangu-2. Ikhishi elisha, igumbi lokugezela elisha eline-Jacuzzi, i-sauna neshawa. Ukugeza nomshini wokuwasha izitsha.
Sine-wifi engu-200Mbit endlini. Futhi kukhona iphakethe le-tv elineziteshi ze-TV zesi-Danish, Swedish, Norweigen kanye ne-German.
4.90 · 122 okushiwo abanye
Indawo ilungele imindeni enezingane ezincane. Endaweni eseduze uzothola amadolobha aseHals naseHou anamabhishi alungele izingane kanye nezindawo zokudlela ezinhle. Uma uthanda ukuthenga nempilo, ungathatha uhambo olusheshayo oluya enhloko-dolobha yaseNorth Jutland, e-Aalborg, ehlinzeka ngemisebenzi eminingi unyaka wonke.